साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले बनाउला इतिहास ? | सबै खेल
साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले बनाउला इतिहास ?
३० आश्विन २०७८, शनिबार ११:५४
नेपाली फुटबलका लागि आज विशेष दिन हो । नेपाली फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धीबाट एक कदमपछि मात्र छ।
साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा पहिलो पटक फाइनल पुगेको नेपालले उपाधिका लागि चिरपरिति प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग भिड्दै छ। खेल माल्दिभ्सको मालेस्थित राष्ट्रिय रंगशालामा राति ८ः४५ बजे सुरु हुनेछ।
५ टिम सहभागी प्रतियोगिताको लिग चरणमा नेपाल दोस्रो हुँदै फाइनल पुगेको हो भने भारत लिग चरणमा शीर्ष स्थानमा थियो। नेपालले २ जित र १ बराबरी खेलेको थियो भने भारतले २ जित र २ बराबरी खेलेको थियो।
सन् १९९३ देखि सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन कहिले पनि सेमिफाइनल भन्दा माथि हुन सकेको छैन् । अधिकांश समय यो प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणमै सीमित हुने गरेको छ ।
यसपल्ट भने नेपालले त्यो परम्परालाई ताडेर पहिलो पल्ट उपाधिको भिडन्तमा ओर्लिन लागेको छ । भारतका लागि भने आजको खेल लगातार आठौं फाइनल हुनेछ । समग्रमा कीर्तिमान सात पल्टको विजेता भारतले फाइनल खेल्न लागेको यो १२ औं पल्ट हुनेछ । अहिलेसम्मका प्रतियोगिताका १३ संस्करणमध्ये सन् २००३ मा एकै पल्ट मात्र फाइनल पुग्न सकेको थिएन् ।
साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले भारतको सामाना गर्न लागेको यो सातौं पटक हो। त्यसमध्ये नेपालले एक खेलमा मात्र जित निकालेको छ। सन् २०१३ मा नेपालले काठमाडौंमा भएको प्रतियोगितामा भारतमाथि २–१ को ऐतिहासिक जित निकालेको थियो । यो भारतमाथि नेपालले हात पारेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रभावशाली जित रहेको छ ।
नेपाल बाँकी पाँच खेलमा भने पराजित रहेको छ । यसपल्टको लिग चरणको हारलाई छाडेर नेपाल अन्तिम पटक सन् २०१५ को साफ च्याम्पियनसिपमा भारतविरुद्ध पराजित भएको थियो । भारतको केरलामा भएको त्यस खेलमा नेपाल ४–१ ले पराजित भएको थियो । यी दुई टिमबीचका पछिल्ला पाँँच खेलमा भारत चारमा विजयी रहेको छ । एक भने बराबरीमा टुंगेको छ ।
Tags: saff championship
कोलकातालाई हराउँदै चेन्नईले जित्यो आईपिएल उपाधि
साफ च्याम्पिनपसिप फाइनल : दुवै टिमका प्रशिक्षक टच लाइनमा नदेखिने
भारतीय टिममा रोहित शर्माको प्रमोसन, एकदिवसीय टिमको कप्तान, टेस्ट टिमको उपकप्तान
२३ मंसिर २०७८, बिहीबार १०:१६